सेटेलाइट लन्च गर्ने दुनियाकै सबैभन्दा ठुलो जहाजले भर्याे पहिलो उडान - VOICE OF NEPAL
सेटेलाइट लन्च गर्ने दुनियाकै सबैभन्दा ठुलो जहाजले भर्याे पहिलो उडान
१ बैशाख २०७६, आईतवार ०३:२९ 162 ??? ???????
दुनियाको सबै भन्दा ठुलो सफ्टवयर कम्पनी माइक्रोसफ्टका सह संस्थापक पल एलनले खोलेको ‘स्ट्रेटोलन्च सिस्टम’ नामक कम्पनीले तयार पारेको पखेटाका आधारमा दुनियाकै सबै भन्दा ठुलो विमानले उडान भरेको छ । सन् २०११ मा माइक्रोसफ्टका सह संथापक एलनले यो कम्पनी खोलेका थिए ।
यो विमान सेटेलाईट लन्च गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । कुनै पनि भुउपग्रहलाई यस्ले १० मिनेटसम्मको उडानमा बोकेर लन्च गर्दै आकासमा छोड्ने छ । विमानका पखेटा ३८५ फिट लामा छन् । यो परिक्षण सफल भयो भने कुनै पनि सेटेलाइट लन्च गर्दा रकेटबाट अन्तरिक्षमा पठाउनु भन्दा योबाट पठाउनु कम खर्चिलो हुनेछ ।
यो विमानमा दुईओटा एयरक्राफ्ट जोडिएका छन् भने ६ इन्जन रहेका छन् । पहिलो पटक विमानले १७० माइल प्रतिघण्टाको गतीमा १५ हजार फिट उचाइमाथिबाट उडान भरेको छ ।
ब्रिटिश अर्बपति रिचर्ड ब्रेन्सनको कम्पनी भर्जिन गेलेक्टिकले पनि सेटेलाइट लन्च गर्नसक्ने विमान बनाएको छ । स्ट्रेटोलन्चले आफ्नो यो विमान सबैभन्दा ठुलो बताएको छ । यद्यपी लम्बाइ र चौडाइका आधारमा धेरै ठुलाय एयरक्राफ्टहरू पनि रहेका छन् ।